Is-haligaad | Suomen Mielenterveysseura
Juhani wuxuu leeyahay wiil 27 jir ah oo Tommi la yiraahdo, labadoodaba waxay deggan yihiin Jyväskylä. Tommi muddo dheer wuxuu ahaa mid madluunsan oo rajo xun. Tommi lama uusan kulmin saaxiibo ama qaraabo muddo bil ka badan. Markan Tommi wuxuu qorey aabihiis fariin qoraal ah, taasoo oraneysa: ”Aad ayaan uga xumahay, noloshan waa nacay, waxwalba waa mugdi iyo waxaan loo baahneyn”. Fariintaas uu Tommi usoo qorey awgeed, Juhani wuxuu ka baqay in Tommi uu isdilo.
Maxaa la gudboon Tommi iyo aabihiis Juhani?
Marka hore Juhani waa inuu wacaa Tommi oo uu wediiyo halkeed joogtaa. Haddii uu ku jawaabo guriga tusaale ahaan, Juhani waa inuu halkaas ugu tagaa. Haddii Tommi uusan ka jawaabin, Juhani waa inuu fariin u reebaa Tommi, oo ah inuu la soo xiriiro sida ugu dhakhsiyaha badan.
Markaa kadib Juhani waa inuu toos u wacaa lambarka guud ee xaaladda degdegga 112. Xitaa lambarka warbixinta caafimaadka (09) 10023 wuu ka heli karaa caawinaadda xaaladaha degdegga, lambarka waa 24 saac waqti kasta. Juhani wuxuu ka helayaa lambaradaar macluumaad muhiim ah, oo ah sidii uu yeeli lahaa haddii wiilkiisu qabaneyn telefoonka uuna ka baqayo inuu isdilo.
Haddi Juhani uu helo wiilkiisa, waa inuu u wadaa si wadajir ah asaga iyo Tommi xarumaha dadka aqoonta u leh arrimahaas sida ugu dhaqsiyaha badan. Dagmo walba ama degmada ugu dhaw waxaa laga helaa xarun caafimaad ama qeybta caafimaadka dhimirka ee degdegga oo 24 saac furan. Haddii Tommi xaaladdiisu liidato, waa muhiim inuu helo daryeel sida ugu dhaqsiyaha badan.
Sida loo la xiriiro xarumaha degdegga ee caafimaadka ama qeybta caafimaadka dhimirka ee degmadaada waxaad ka heleysaa bogga internetka ee adeegyada caafimaadka ee degmada. Waxaad kaloo ka heli kartaa xitaa lambarka warbixinta caafimaadka (09) 10023 oo ah 24 saac, xarunta caafimaadka degdegga ah. Xaaladda waxaad kaloo kal hadli kartaan oo wici kartaan oo aad wediin kartaan caawinaadaha furan lambarka telefoonka guud ee wadanka ee arrimaha dhibaatooyinka 01019 5202.
Haddii Tommi uu diido inuu caawinaad doonto, xaaladdu waxay noqoneysaa mid Juhani ku cuslaato. Waa wanaagsanaan laheyd in Tommi iskiis caawinaad u raadsado oo aamino inuu helayo daryeel habboon. Waxaa daryeel xooggan oo helayo niyadjabkan suurtagalka ah ee Tommi, kuwaas oo ah sida daaweyn ama terabiyada dhimirka.
Waa ay wanaagsanaan lahayd in Juhani uu si furfuran ugala hadlo Tommi fikirkan ishaligidda ah, inkastoo marka hore ay adag tahay. Su’aalidda fikirka is-haligaadda ma aha mid ku dhiirigelineysa is-haligaadnimada. Waxaaba laga yaabaa in Tommi ay u fududaato inuu toos uga hadlo arrimihiisa oo sidoo kale Juhani shakibaxo. Laga yaabaa in Tommi fikirkiisa yaraado.
Tan ugu wanaagsan waxay tahay in Tommi uu helo caawinaad xirfadeesan ee dhibaatadiisa. Juhani ma dabajoogi karo waligiis Tommi, mana aha shaqadiisa. Dabajoogidda qofkale, ma aha marnaba mid xal wanaagsan ah, xitaa haddii uu yahay ilmahaaga qaangaaray.
Inta badan ee la og yahay waxaa jira in finishku mararka qaar uu jiro fikiradaha is-haligaadda. In badan oo ka mid ah way ka baxeen fikirkoodii oo aad bay u faraxsan yihiin, wayna noolyihiin. Xilligii madluunsanaantana waxay noqotay mid horey looga gudbay. Waxa jirtaa marmar xilli, kaasoo aad ogaaneyso markii laga soo dhaafo fikirkii ishaligidda oo aad dareemeyso qiimaha ay leedahay nolosha.